above - Synonyms of above | Antonyms of above | Definition of above | Example of above | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for above
Top 30 analogous words or synonyms for above
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ် အနည်းငယ်မှာ State (နိုင်ငံ)ကို နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လွှမ်းမိုးတဲ့ပုံစံလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သည်နေ့ ခေတ်မှာတော့ Above the state နဲ့ From below အနေနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါတယ်။ Above the state ရဲ့ ဆိုလိုရင်း သဘောကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ State (နိုင်ငံ)ရဲ့ လုပ်ငန်းဖန်ရှင်များစွာကို အစားထိုးမယ့် Structures (ဖွဲ့စည်းမှုတွေ) အတွက် အုပ်စုဖွဲ့ခြင်း (grouping) တွေပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ သည် Above the law က အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ EU,NAFTA the challenge from above ကတော့ စီးပွားရေး ကိစ္စရပ်တွေသာမက ဘာသာရေး ကိစ္စရပ်တွေပါ အကျုံးဝင် နေတာတွေ့ရပါတယ်။
ရှေးဦးသူနာပြုလက်စွဲ • 104 F and above အပြင်းဖျား။
ရုရှားသဒ္ဒါ Russian differentiates between hard-stem (as above) and soft-stem adjectives. Note the following:
ဆေးဝါးဗေဒ (1) Artemether + Lumefantrine, Adult (14 years and above) = 0h - 8h - 24h - 36h - 48h - 60h =4-4-4-4-4– 4
ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲလေယာဉ် The B-29s were outfitted with filtered air sampling scoops and monitored debris from above ground nuclear weapons testing by the United States and the USSR. The aircraft were also used for long-range weather reconnaissance (WB-29) and for signals intelligence gathering and photographic reconnaissance (RB-29).
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးပညာ နိုင်ငံအနေနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိုအင်တွေကို ရရှိစေရေးမှာ နည်းပါးတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ From above အနေနဲ့ကြည့်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဲဒါတွေကို သီးခြားနိုင်ငံ တစ်ခုချင်းအလိုက် လွယ်လင့်တကူ မဖြေရှင်းနိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ Green house ဓာတ်ငွေ့တွေက ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံတိုင်းကို နွေးစေပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ သင့်တော်တဲ့ စကေးကလည်း ၂၀ ရာစုမှာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီတွေဟာ နိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်၊ ပြင်သစ်နဲ့ အီတလီ နိုင်ငံတွေမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ နျူကလီးယား နည်းပညာ၊ လေယာဉ်လုပ်ငန်းနဲ့ အာကာသ နည်းပညာတို့လို သွက်လက် ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ စီးပွားရေးဆန်ဆန် အလုပ်လုပ်ဖို့ ပိုမိုကြီးမားတဲ့ စကေး လိုအပ်ပါတယ်။
Queercore queercore မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ကားများတွင် ၁၉၉၆တွင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သော Lucy Theme She’s real, Worse than Queerနှင့် Scott Treleaven ၏ A Punk – u – mentary တို့ပါဝင်ခဲ့သည်။ Tracy Flannigan ၏ Rise Above; A Tribe & Documentary ကို ၂၀၀၃ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွင့်ခဲ့သည်။ Machae Carmona ၏ Pansy Division Life in A Gay Rock Band ကို ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်များကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များကို ပုံမှန်ပြသခဲ့သည်။